'' Aragtidayda sharci ( My legal opinion ) '' .
Monday April 01, 2019 - 15:05:51 in Articles by Hadhwanaag News
Arrinta saxaafadda ku jirta ee ku saabsan Ganacsadde Ahmed Osman Geelle haddii aynu ka eegno dhinaca Sharcigga oo keliya , waxaynu kusoo koobi karaa 3 qodob.
1- Qadiyaddu marka ugu horaysa maxay tahay ?
Qadiyaddu waa qadiyad ku saabsan muran ganacsi iyo dhaqaale , sidaa darteed qadiyadaasi gebi ahaanba ma aha mid ay ka dhalan karto dacwad ciqaaba oo kalifi karta in Ahmed iyo qayrkii toona la xidho amaba dal shisheeye loo dhiibo . maxaa yeeley waa qadiyad ganacsi
( Commercial dispute ) waxaana saxa in nidaamka iyo xeerarka ganacsiga loo maro .
2- Dacwada Ganacsi sidee bay ku iman kartaa
Dacwad ganacsi oo qadiyada ku saabsani labba waddo ayuun bay ku iman kartaa oo kala ah ;-
A- In Dacwad caadiya oo madaniya cidii ganacsadaha wax u sheeganaysaa ka furato Maxkmadaha Wadanka , ganacsaduhuna iska difaaco , isaguna sheegto wixii ka maqan .
B- In Djabouti la timaado xukun Maxkamadeed oo ay dalbato in loo fuliyo ,
qodobkan labaad na suaal aasaasiya ayaa ka dhalan karta , oo ah Xukuno ka dhan ah ganacsadaha oo kasoo baxay waddan shisheeye ma la aqoonsan karaa .
3- Suaashaas jawaabteeddu waxaa si faahfaahsan uga hadlaya qodobka 313 Xhm , kaasoo ku xidhiya aqoonsigga xukunadda shisheeye 6 shuruudood , sidaa darteed iyadoo la raacayo qodobkaas jawaabtu waxay noqon kartaa :-
'' Qodobka 313 (2) waxay sheegaysaa in dhinacyaddu uga qayb galeen dacwada la aqoosnayo si sax ah .
sidoo kale qodobka 313 (6) Xhm waxay sheegays iaa n xukunkaasi aanu kasoo horjeedin nidaamka caamka ah ee Waddanka .
Sidaa darteed iyadoo lagga duulayo qodobka
313 (2.6)XHM iyo qodobka 78 xhm oo ka hadlaya Qaynuunka guud iyo Cadaaladda Guud . Iyo Mabaadida guud ee Danta Qaranka ( Public Interest ) .
Xukuno ka dhacay Maxkamadd shisheeye oo ka dhan ah Ganacsadahan iyo shirkadda lama aqoonsan karro , lamana fulin karro sharci ahaan .
Sidaa darteed , wuxuun bay qadiyadani kusoo uruuraysaa sharci ahaan in Maxkamadaha Waddanka qadiyadan ka garnaqaan haddii cidi u dacwooto
W/Q: Axmed Nuur Guruuje